နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် – ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကွမ်နင်းပြည်နယ်ရှိ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် စာရင်းဝင်း Ha Long Bay သို့ သွားရောက်လေ့လာ၊ ဗီယက်နမ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဗီယက်နမ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ | Myanmar Deaf Community Development Association (MDCDA)
မြန်မာနိုင်ငံနားမကြားသူများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူရစေရန် အတွက် မိမိတို့၏ စေတနာ၊ သဒ္ဒါဆန္ဒအလျောက် အောက်ပါ ဘဏ်စာရင်းများသို့ ထည့်ဝင် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
Home > Media > Update News > နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် – ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကွမ်နင်းပြည်နယ်ရှိ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် စာရင်းဝင်း Ha Long Bay သို့ သွားရောက်လေ့လာ၊ ဗီယက်နမ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဗီယက်နမ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် – ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကွမ်နင်းပြည်နယ်ရှိ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် စာရင်းဝင်း Ha Long Bay သို့ သွားရောက်လေ့လာ၊ ဗီယက်နမ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဗီယက်နမ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဥပဒေ SL DVD ဖြန့်ချိခြင်
95/E, Ground Floor, Thar-yar-aye Street, Myo Ma Ward, Mayangon Township, Yangon, Myanmar 11062.
© 2017-2019 Myanmar Deaf Community Development Association (MDCDA). All Rights Reserved.